सिद्धार्थ बैंकको जेठ २५ देखि ३०% हकप्रद खुल्ने, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ बैंकको जेठ २५ देखि ३०% हकप्रद खुल्ने, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - जेठ २५ गतेदेखि सिद्धार्थ बैंकले ३०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १०ः३ अनुपातमा १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८.१३ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले १०० रुपैयाँको दरले हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । सिद्धार्थले असार २८ गते बैंकिङ समयसम्म यो हकप्रद भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले हकप्रद बिक्री गर्न आज (मंगलबार) बुक क्लोज गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक विदा परेका कारण सेयर कारोबार भएन । यस आधारमा आइतबारसम्म (जेठ १४) कायम सेयरधनीले मात्र सिद्धार्थको ३०% हकप्रद सेयर भर्न पाउने छन् ।
यसको बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट हो । लगानीकर्ताले सिद्धार्थ बैंकको हात्तिसार, काठमाडौंलगायत यसका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट हकप्रदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट, वानेश्वर र सिद्धार्थ क्यापिटल नक्साल, काठमाडौंबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सिद्धार्थले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन ३०% हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो ।
प्रकाशित मिति : Tuesday, May 30, 2017